Hutano, 01 Ndira 2014
Chitatu 1 Ndira 2014
Zvita 23, 2013
Vagari Vanotambira Danho reKanzuru yeBulawayo reKusavhara Mvura paZororo
Vagari vemuguta reBulawayo vanoti vari kufara zvikuru nedanho ratorwa nekanzuru yavo rekusatapudza mvura inoshandiswa nevagari kubva neMuvhuro kusvika musi wegore idzva kuitira kuti vagari vatambe zororo rekisimusi negoredzva vaine mvura.
Veruzhinji Voonekana naVaMandela
Vanhu vatanga kuona mutumbi wevaimbove mutungamiri weSouth Africa, VaNelson Mandela, pamahofisi ehurumende pa Union Buildings mu Pretoria.
Zvita 10, 2013
VanaChiremba Vekodzero Dzevanhu Vokurudzira Ongororo yeNdufu dzeVasungwa
Sangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu, reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, ZADHR, riri kukurudzira kuti paitwe ongororo yehonzeri yekufa kwevasungwa vangangosvika zana vanonzi vakafira mumajeri emunyika kubva kutanga kwegore rino
Vatungamiri Vakawanda Vanoungana muSouth Africa Vachirangarira VaMandela
Vatungamiri venyika dzakasiyayana siyana vanodarika zana, kusanganisira vave pamudya ndigere, vaungana munhandare yeFNB kuJohannesburg vachichema kushaya kwevaimbove mutungamiri weSouth Africa, VaNelson Mandela.
Nyanzvi Dzokurukura Nyaradzo yaVaMandela kuSoweto
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kuungana kwaita vatungamiri venyika dzakawanda muSouth Africa kunoratidza kuti vaimbove mutungamiri wenyika iyi, VaNelson Mandela, vaiva munhu anoremekedzwa pasi rose.
Vanhu Vakawanda Vanochema Kushaya kwaVaMandela
VaMandela, avo vakava munhu mutema wekutanga kutungamira South Africa muna 1994, vakashaya mushure mekurwara kwenguva refu nechirwere chemapapu.
African Union Yoderedza Mireza Yavo Ichirangarira VaMandela
Sachigaro wesangano reAfrican Union, Amai Nkosazana Dlamini Zuma, vanoti vaimbova mutungamiri weSouth Africa, VaNelson Mandela, munhu akararama hupenyu hwekudzidzisa vanhu kukosha kwerudo, kubatana kwemarudzi, uye kuregererana.
Vanhu Voita Mudengu Mudengu Kutsvaga Mari yeKubatsira Mwana Ane Gomarara
Masangano emadzimai nemamwe anoshanda akazvimirira abatana nevaimbi neChishanu muHarare mukubatsira mwana ane makore matatu ari kunetseka nechirwere chegomarara.
Zvita 05, 2013
VaNelson Mandela Vanoshaya muJohannesburg neChina Manheru
Vaimbova mutungamiri weSouth Africa, VaNelson Mandela, vashaya muJohannesburg South Africa neChina manheru.
VaMnangagwa Voramba Kuti Vasungwa Vari Kufa neNzara
Gurukota rezvemitemo, VaEmmerson Mnangagwa, varamba neChitatu mashoko akataurwa nevakuru vakuru mubazi ravo ekuti pane vasungwa vanodarika zana vakafira mujeri munyika kubva pakutanga kwegore nekuda kwenzara.